Nandray anjara tamina "visioconférence" iray ireo ankizy ireo tamin'ny andro manerantany ho an'ny tontolo iainana. Tanjona tamin'izany ny hanentanana olona maro mahakasika ny fiarovana ny zava-boahary. Tafiditra tao anatin’ny andiany faha-valo amin’ny Gazprom International Children’s Social Programme Football for Friendship ilay hetsika fanentanana. Ankizy avy any Aruba, Cote d'Ivoire, Danemark, Madagasikara, Namibia ary Pakistan no niara-nandray anjara tamin’ity conférence ity. Nodinihan'izy ireo tamin’izany ny olana mianjady ny tontolo iainana, ny fiarovana ireo biby efa ho lany tamingana, ny fanaovana asa an-tsitrapo ary koa ny fampielezan-kevitra atao isaky ny firenena mba hiarovana ny tontolo iainana. « Ny olona rehetra dia manana anjara amin'ny fiarovana ny tontolo iainana... Ary tena zava-dehibe tokoa ny miaro ity tontolo iainantsika ity » hoy i Irintsoa, manao antso avo amin'ireo ankizy toa azy.